कोरोना विरूद्धको अर्को खोपले पनि पायो अनुमति, कस्ता व्यक्तिले लगाउन पाउँछन् त्यो खोप ? « Salleri Khabar
कोरोना विरूद्धको अर्को खोपले पनि पायो अनुमति, कस्ता व्यक्तिले लगाउन पाउँछन् त्यो खोप ?
२० जेठ, एजेन्सी । चिनियाँ खोप सिनोभ्याक्सलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले आकस्मिक प्रयोगका लागि मान्यता दिएको समाचारमा जनाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंगलबार सो खोपलाई मान्यता दिएको जेनेभाबाट प्राप्त भएको समाचारमा जनाइएको छ ।